RAVELOSON COSTANT : MBOLA EO AMIN’NY DINGANA FAMONOANA VOALAVO ISIKA IZAO – MyDago.com aime Madagascar
1300 andro taorian’ny kabary miezinezina nataontsika ny volana Febroary 2009 teny Mahamasina hoy ny CT Raveloson Constant, androany teny amin’ny Magro Behoririka dia mbola eto ihany isika. Tamin’izany hoy izy, no nametrahantsika hoe miala Rajoelina. Mbola vonona isika raha mbola misy 1300 andro manaraka hametrahana fitondrana tsy azo hozongozonina miaraka amin’ny filoha Ravalomanana. Mbola eo amin’ny dingana famonoana voalavo hoy Constant, isika izao. Ilay mpanao hena an-tanan-tsaka mbola tsy mety maty ary tsy mbola maty voalavo an-kibo. Mila ampiana izy amin’izany, hoy izy, ka fomba ahoana no hanampiana azy, ary ahoana ny fisehoan’ilay voalavo tsy mety maty ? Raha mbola miteny hoy ity mpanao politika ity, hoe izaho dia manaiky ny hirotsaka kandida raha tsy manakorontana Ravalomanana. Ilay mpanongam-panjakana indray no milaza fa tsy manakorontana. Mbola tsy miteny amin’ny fo tsotra Rajoelina hoy Constant, ka izay ilay voalavo tsy mety maty. Ny tena voalavo be tsy levona amin’ilay saka hoy izy dia raha manaiky izy dia vita ny fifidianana vao mody. Rehefa tsy nifampidinihana izany dia tsy tokony holazaina fa matoa mbola miteny dia tsy maty voalavo an-kibo.Nambaran’i Constant koa fa tsy mbola mandeha ho azy ny dingana manaraka. Lazaina hoy izy fa ny foloalindahy tsy manaiky rà mandriaka. Tsy azo tampohina fa lafiny teknika no atao miaraka amin’ny Troika. Ny resaka tsy hoe handinika indray na hamantatra, fa manao évaluation mialoha, hoe aiza ny lalana ivezivezena. Dikany dia manao évaluation teknika amin’ny ahatongavany ny filoha Ravalomanana eto. Izay ilay tsy maty voalavo an-kibo. Jereo hoy Constant, ilay paika fa any aorian’ny fifidianana. Amin’izay dia milaza fa mbola tsy azonay antoka fa amin’ny volana Novambra, dia tsy afaka milatsaka satria tsy feno ny enimbolana. Ahoana hoy ity olomboantendry ity, no tsy ahatongavan’izany sy hisakanana izany. Noho izany ny adidintsika dia ny hoe amin’ny fomba ahoana no mahatonga ity tany ity, tsy hanaiky izany, fa amin’ny fotoana napetraky ny Sadc ihany. Tsy ny mpanongam-panjakana hoy izy, no ilaza fa hoe tsy mbola azo antoka ny hiverenany fa misy korontana.Raha ny AV7 hoy izy no manakorontana dia asaivo alamin’ny Richard baomba. Ny foloalindahy ve? efa fantatra ireo hoy izy, fa ny tena miaramila, zandary, polisy fa tsy milisy dia izao no fipetraky ny resaka. Mety hikorontana ny AV7, ahoana no fomba hifehezana izany. Tena foloalindahy dia miaraka amintsika amin’ny hoe ahoana no fomba hamonoana voalavo. Misikina isika hoy Constant, fa eo amin’ny ilay jesosy mba tantano isika izao.
Auteur Solo Razafy*Publié le 20 août 2012 20 août 2012 Catégories Politique
13 pensées sur “RAVELOSON COSTANT : MBOLA EO AMIN’NY DINGANA FAMONOANA VOALAVO ISIKA IZAO”
mba tene ratsy taiza ireto mafana ireto;miteniteny foana ka manaratsy endrika ny zanakidada!mba mendrika ve ny olona toa itony!miareta ao ianareo zanak,i dada!
Tena marina loatra ny volazan’Atoa Constant an!
Mavesatra loatra ny hevitra entin’i Constant ka misy tsy mahazaka. Vao fehezanteny iray fotsiny no lazain’i Constant dia mihorohoro ny « fat(y) ».
Mankasitraka amin’ny fanehoan-kevitra arosonareo izahay ry Constant ah! Tsy maintsy mandresy ny tolona. Ny TSARA ( Transition sans Andry rajoelina ihany no izy)
mety ho marina !fa ilay voambolana ampiasaina eeee!dia tena mafana eeeee!tsy mahagaga io fa izany no fitaizana azy ireo!mba ahoana hoy jeneraly ranto e!andraso eto !manaova hendry hoa!
manaiky ny fodian’i dada ny lehiben,ny tafika avy atsy mapouto!afaka isika ;amin,ny herinandro izany fa mbola mampirina entana ny fianakavian,i dada hono!vaovao farany tao @ matv io izao hariva izao
Mitadyy hampiady ndray Ra-Raiamandreny annnn, ny zanak’i Dada tsy azonao @zany tsony, efa hainay ny fomba fiasanareo Fat (Foza), fa raha tsy Fat(Foza)ianao dia ajanony dieny izao izany hevitrao izany fa fomba fiasandry zareo io ataonao io, azafady ndrindra. Mazava be ny tenin’i Constant fa mila mailo sy misikina ny zanak’i Dada, satria tsy @ty 1 na2 volana ity ihany no ady fa mbola hanao foana ny Fat ka tsy maintsy miatrika isika, ny 1300 andro aza haritra, mivonona hiatrika izay mety ho 1300 andro manaraka hamonoana ny voalavo, sns, maka marge izy @io ny @ efa hita, dia mivonona ny @zay mbola tsy fantatra, raha hanao izy hoe 1 na2 volana io, rehefa lasa izay ka tsy nisy ny vokatra nahafapo sanatria, dia ho hisy indray ny kivy, fa raha 1300 andro no lazainy ka tonga ao anatin’ny 1 na2 volana ny hiriantsika enga anie, ho ambony kokoa ny fifaliantsika, sy ny herim-pontsika @zay. Satria isika efa nivonona ny @1300 andro manaraka no tonga aloha tampoka ny tanjona, diniho @ tenanao dia ho hitanao hoe marina ny nolazainy.
21 août 2012 à 1 h 04 min
Mino aho fa fantatr’i Rajoelina tsara fa fanonganam-panjakana no nataony tamin’ny 2009 iny. Ary ireo miaramila mety nampiasany tamin’izany dia mino koa aho fa mahalala tsara fa tsy ho an’ny Tanindrazana sy ny vahoaka izany no nataony sy mbola ataony ary matahotra mafy izy raha tonga eto Ravalomanana fa azony antoka fa ratsy ny tantarany ka aleo miaro mafy ny tsy ahatongavany. Lay hena an-tanantsaka manko amin’izay ho lasa poizim-boalavo ary miaramaty ny saka sy voalavo. Ahoana moa no ilazana fa hisy korontana eto raha tonga eto Ravalomanana? Ny AV7 vitsy sy ireo mety ho karamany ve no hitarika korontana dia lazaina fa ny vahoaka malagasy 20 tapitrisa no tsy manaiky. Ahoana moa no tsy ahafehezana izany raha misy te hanao izany ? Ny fahatongavandRavalomanana no mampisy ny filaminana e. Ataoko fa tenindRavalo ny hoe tsy hanao valifaty. Ary tsy demokrasia koa izany fa izay hifampiresahana isian’ny fifandaminana ihany no izy. Fa ny vahoaka momba andRavalo izao no hita fa maro ary miaro ny safidiny tsy voahosihosy. Ary aiza izay vahoakan ‘i Rajoelina ? Ny AV7 ve ? Lava ny resaka fa ny fahatongavandRavalo no tsy isian’ny korontana fa lainga daholo ny akoatr’izany. Ny tena Tanindrazana Rajoelina sy ianareo miaraka mivory aminy jerena a. Ary isika vahoaka niaro azy ireo mino aho fa mahita ny Tanindrazantsika latsaka an-davaka ary feno faharatsiana nohon’ny nataon’ireo. Tsy hoe fombako an’i Constant fa marina ny azy
21 août 2012 à 8 h 07 min
NY TODY TSY MISY FA NY ATAO NO MIVERINA – ATAOVY LATSAKA AO AN-DOHANTSIKA OLOMBELONA IZANY TENY IZANY RAHA MATAHOTRA AN’ANDRIAMANITRA ISIKA E
Resaka Ramenabila.Misy ny mitantara ny marina, ity vao avy novakiako tamin´ny Tananews.
« Ny Tena marina, dia ireo officier superieur taminíreo lisitra » Miaramila mpanongam-panjakana » Ireo no ao ambadikío » Ramenabila » ireo Officier ireo no mamatsy basy ny dahalo, mias ho azy ireo.
Ka basy sy munition tao amin´ny CAPSAT , nvoka tamin´ny 2009, satria gaboraraka ny tao, dia samy naka ireo Officiers mpanongam-panjakana ireo, ka samy nampiasa ny basy azaony, Tao ny nivarotra, tao ny nampanofa, ary tao ny nampiasa jiolahy sy dahalo ato fitadiavam-bola.
anisan´ny lehiben´i ramnenabila : Colonel BELONE . dia misy miaramila miara miasa aminy.
Anisan´ny mahalala ny secret coup d´Etat 2009, izy io ary anisan´ny atahoran´i CEMGAM, dia izay nahatonga an´i CEMGAM sy Razanamahasoa Christine nihazakazaka tany hanao negociations satria olona fanatr´izy iero tanteraka ny ao ambadik´io resaka Dahalo Ramenabila » tsy izy fa ny amboakely tiana , ireo officier Mpanongam-panjakana, izay anisan´ny tsy nahazo volabe tahaka ny vola voaoagon´i andry rajoelina sy ravatomanaga, fa voafitaka, natao tohatra fiakarana fotsiny ihany, Hany ka mapiasaizay fitaovam-piadiana hanana izy ireo ahazahoana vola.
Mila fanadivana tanteraka ny tafika malagasy sy ny polisy malagasya, fa tsy azao ekena sy ianteherana ny tahaka izao.
Ny zavatra fantatra dia voasakatsakana be ihany ny fangalana ny vao2
marina momba ity Ramenabila izay tsy misy akory fa ny Ramenabila misy
ary efa hitam-poko hitam-pirenena dia io ao Ambotsiroatra domelina be io, tsy misy saina afa tsy ny mandroba .
ny zavtra mampalahelo dia maninona no ireo vahoaka no faiziny fa tsy ireo izay manitaka azy ireo???hay tany i
Zanakisoa???tena vehivavy jilaka !Mpams @ andro atoandro, manome litika kala tsivanona iny.
22 août 2012 à 4 h 30 min
Misaotra anareo havako isany ao @ Magro
Mafana tsara ny ambiance, tsy de misy voan’ny grippe.
Izaho mantsy ato azon’ny rivotra mangatsiaka mifofofofo dia kdô voa ê!
Mitady stratégie foana i AndryRajoelina-RatsianaOrana-VatatayMiaramila
toa ny fangatahana fotoana eo @ fahazahoan’i dada miditra ny territoire malagasy.
Mandeha ny ora,
sao rehefa manantona ny vanimpotoana 6mois avant date éléctions ny filatsahana ho fidian’ny teratany mipetraka eto,
vao mipenipenina indray isika hoe AIZA FOANA I DADA?!
Efa cerveau lavé ny an’ireo miaramila ireo,
ilay lazaina fa nikomy farany teo Ivato aza no-éliminer n’i Lyllison
Ity Generaly André aza mpifoka MÔLY izay tsy nanaraka ireo vatatay 3 lahy nankany Maputo teo,
nanao forcing hangala-badin’olona tany Androy tananan-dRamenabila
Farany teo moa dia nisy containers
(maromaro hoy ny tsy mahay manisa)
no-forcer n’i FIS de putes tarihin’i Lylisson: aiza daholo ireny?
nivoaka ny seranan’i Toamasina
Ny tena tapaky ny SADC marina tamin’ny fivoriana farany teo dia araka izao voalaza izao: « SADC is adamant that the former leader must be allowed to return home. »
Raha adika teny gasy dia manao hoe: « Tsy maintsy afaka miverina any an-tanindrazany Marc Ravalomanana. » Mbola nampian’i Salamao hoe: »Tsy misy fepetra ny fiverenany any. » « Voalohany indrindra aloha dia miverina izy. »
Vaovao fanampiny !
Hoan’ny foza mandalo ato ! Fantatr’izao tontolo izao ny zavatra ratsy nataonareo mianakavy ; ary fantaro fa tsy dondrona toa ireo nanaika sy nentina ho atao sorona akory ry zareo, ka hanaiky ho fafàzana lainga maraina, antoandro sy hariva !
Ankaotr’ireo fanambaràna nataon’i sarla, efa mazava be koa ny nataon’ireo olona roa, ary eny ampelatanan’ny Ambasady amerikana amin’izao fotoana !
Précédent Article précédent : RALAISEHENO GUY MAXIME : TSY MITSAHATRA MISANDRATRA NY FITIAVAN-TANINDRAZANA ASEHON-DRAVALOMANANA
Suivant Article suivant : FJKM : LANY 1 ER TOUR NY FILOHA RAVALOMANANA